Crazytel - Cheap Calls to Zimbabwe from UK mobile
Cheap calls to Zimbabwe from UK mobile
To call Zimbabwe, dial the access number 0344 545 2020 or
Upon hearing the voice prompt enter the Zimbabwe number, using the full international dialling format, followed by the # key (e.g. 00263 + phone number + #).
Cheap calls to Zimbabwe from your mobile
Check rates for cheap calls to Zimbabwe from a UK landline
Make cheap calls to Zimbabwe from your mobile using CrazyTel so you can talk for longer with your friends and family. Calls to Zimbabwe are charged at 18.0p per minute for a £10 top-up. Calls to Zimbabwe Mobile are charged at 54.0p per minute for a £10 top-up. To call Zimbabwe from your mobile dial 0344 545 2020. Upon hearing the voice prompt, enter the destination number using the full international dialling format, followed by the # key (e.g. 00263 + phone number + #).
Enjoy calling your friends and family in Zimbabwe!
CrazyTel customers who make cheap calls to Zimbabwe also make cheap international calls to the following destinations to keep in touch with their loved ones: